July 11, 2010 by dalabyo 37 Comments
Paul lagu wareysto kooxda Transposh
Waxaan Paul marti qaaday farammugo si ay Transposh for laba qof oo ah inay dardar geliyaan ka dib markii uu guul ugu dambeeyay ee koobka adduunka. Waxaan ka codsatey inuu sameeyo a saadaasha dhowr noo saabsan version imaatinka Transposh, iyo tan iyo ka dib aad u badan la cabbo, wuxuu ahaa runtii iskaashi oo aanu lahaa fursad ay ku sameeyo Wareysi gaar ah isaga oo leh.
Ka dib markii qayb ka mid ah in uu noqday ay taha aamusan, iyo ina xusuusiyey by iljebinaysa aha in octopuses runtii la hadli karaa. Sidaas awgeed, waxaan go'aansaday in aan for the loona ilaaway isaga oo laba sanduuq, waxaan u dhig leh sawir fiican ee weyn a, iyo mid kale oo leh sawir ah muujinta a (kordhay?), iyo waxaan sugayay isaga si uu u furo hadba sanduuqa wuxuu arkay taam. Dabcan uu furay sanduuq kutaan ku, taas oo aanu u arkay inuu sabab ay u qori digniin caadiga ah in cayayaanka xitaa kaaga siiban laga yaabaa in loo marayo baaritaanka our (xataa iyaga oo gargaar ka sideed Nebi hubaysan oo shaqo noo on QA). Waxaan sidoo kale loo isticmaali fursad ay ku soo qori kartaa hage degdeg ah on sida aad u heli version horumarinta for debugging a boggayaga Wiki.
Warqabaa ugu dambeeyey, alla kii doonaya inuu na ay gacan u siiyaan (ama lugta), ama uu doonayo inuu kula dunida Share Widget abuurista uu yahay in ka badan ayaa soo dhaweeyay in ay nala soo xiriir.
Enjoy ciyaarta maanta, wax su'aalo ah oo si Paul waxaa si toos ah loogu gudbinayaa isaga doona.
P.S – share caadiga ah ee Kumandoska kutaan ku jiraan, go'an a luqado dhowr ah ee msn turjumi iyo ku daray a luqado dhowr ah goobaha ka (weli ma auto translatable – laakiin ugu dhakhsaha badan noqon doona)
Update: si ay kutaan muhiim ah oo laga helay Xaaladaha qaarkood mahad, 0.5.6 oo ahaa deg-deg ah la beddalo 0.5.7 thanks for kuwa la sheegay in this dhan, mahadnaq gaar ah si dgrut.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: Bing (msn) turjumaan, wareysiyo been, yaryar, sii daayo, widget, plugin wordpress